International Hotel Projects - Armati Hotel Project In Eoropa
Armati Hotel Project In Eoropa
Talata, Jona 23, 2015 12: 31: 02 AM America / Los_Angeles
Ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny manomboka Armati 5 tetikasa any Eoropa, Tonga soa eto amin'ny mitsidika ity trano fandraisam-bahiny mba hahita ny faucet.
Teny an-freeway Florence-Siena, iray manontany tena hoe inona ny vaovao sy ny futuristic trano, izay hitantsika ao amin'ny Bargino tanàna (akaikin'i San Casciano Val de Pesa), mety ho.
Izany no vaovao Antinori ny winary, ny vokatry ny iray fatra-paniry laza tetikasa mafy te avy Antinori ny Fianakaviana, izay mahatonga divay avy any 26 taranaka, ary, rehefa afaka dimy taona, mahatonga ny foibe avy any amin'ny afovoan-Florence ny fon'ny "tavoahangy Classico" .Ny lakaly dia nanao mpikaroka tany amin'ny havoana iray ary avy eo nandrakotra ny trano sy ny tany.
Ny tetikasa vaovao winery (izay manana fanajana lehibe ny Tuscan tontolo iainana sy ny tontolo) dia manam-paharoa satria an'ireo trano Mitambatra baovao sy teknolojia ny divay ankehitriny kevitra miaraka amin'ny fianakavian'i Antinori fomban-drazana.
Ity trano fandraisam-bahiny opend Febroary 2013.
Hotel efitra fandroana tetikasa any Eoropa
Hotel tetikasa efitra fandroana faucet